Pakisitani - ALinks
February 8, 2021 Maitri Jha Pakisitani, vhiza
Tora vhiza yePakistan: Pakistan inogona kunge isingave nzvimbo pane yako yekufamba runyorwa. Nekuda kwekuchengetedza nyaya kune vese vashanyi nevagari. Idzi nyaya dzave kutadzisa maAmerican kuPakistan. Asi, kudzivirira vashanyi vazhinji vane ruzivo
Pakistan yekufamba mutengo
December 11, 2020 Antika Kumari Pakisitani
MuPakistan, zvinoda marii kuenda kudzoka shure? Mhinduro dzese dzinozopihwa kwauri kubudikidza neiyi bhajeti rebhajeti Kuparara kweguta-neguta, avhareji mutengo wezvakajairwa mashandisirwo, uye bhajeti pekugara mazano anosanganisirwa. Mukati mePakistan,
China Visa YePakistan
October 20, 2020 Antika Kumari China, Pakisitani, famba
Pakistani vamiriri vepasipoti vanobata vanobviswa mumavisa. Uye inogona kusara kusvika kumazuva makumi matatu mukati mainland China uye kusvika mazuva gumi nemana muChina Hong Kong SAR neMacao SAR. Varidzi vePakistan vane pasipoti vanobvumidzwa kusabviswa mumavisa.
Nzira dzekufambisa muPakistan
June 17, 2020 Antika Kumari tenderera, Pakisitani
Dai 4, 2020 Karuna Chandna mabasa, Pakisitani
KUSHANDA uye Kurarama muPAKISTAN NEMUDZIMAI WEMAHARAI REMPENYU Uri kugadzirira kugara uye kushanda muPakistan? Kana kuti watove ex-pat uye wangotamira kuIslamabad, Karachi kana rimwe guta rePakistan nedzimwe nyika? Tsvaga basa
Cheap uye Best Hotels pamusoro Pakistan
December 5, 2019 Maitri Jha Hotels, Pakisitani
Tsvaga nekuwana Mahotera muPakistan Mharadziro dzakasarudzika pakati peMiddle East neCentral Asia, Pakistan yagara iri vanhu vazhinji netsika kuburikidza nemazana emakore. Chasara ndechimwe cheAsia inonakidza nyika, iyo iri yakawanda
December 4, 2019 Maitri Jha Pakisitani
Health Care Delivery System (HCDS) ndiyo gadziriro inoshanda kwazvo kune chero nyika yenyika nekubudirira, kwakaringana, kwakaringana kugovera zviwanikwa, uye mari yezvivakwa yakarongeka kuti ibudirire. Pasi rese, HCDS inova inokwikwidza uye inokurumidza kukura sevhisi
Best Masters muPakistan
December 4, 2019 Karuna Chandna Pakisitani
Kutenga ndiko kwakanyanya kufadza uye kunoitawo kuti vakadzi vafare uye dambudziko rakagadzirwa kuti vakadzi chete vanofarira kutenga. Kana zvikapihwa nenzvimbo yekutengesa, varume vanofarira kuenda kunotenga. Makore mashoma apfuura, Pakistan yaive
December 3, 2019 Karuna Chandna Pakisitani
Ongororo yeMabhangi muPakistan Iyo State Bank yePakistan (SBP) ndiro bhanga repakati renyika. Yakaverengerwa pasi peState Bank yePakistan Mutemo, 1956. Bhanga repakati rinoona nezve kudzikamisa mari uye kuona kugadzikana kwenyika
Nguva yakanaka yekushanyira Pakistan
December 3, 2019 Antika Kumari Pakisitani
Pakistan inyika isinganzwisisike kazhinji. Yakafamba nenguva dzayo dzekutambudzika, asi kushanya mumaruwa kwave kunhonga zvakatsiga mumakore mashoma apfuura. Pakistan ndiyo imba yeimwe yekare budiriro mukati